Galaxy M30s waxay la imaan doontaa batari 6.000 mAh ah Androidsis
Kala duwanaanta Galaxy M ee Samsung ayaa leh soo dhaweyn wanaagsan suuqa. Sidaa darteed, nooca Kuuriya wuxuu ku shaqeeyaa moodooyin cusub, sida Galaxy M30s, Kuwaas oo aan bilaabayno inaan helno war ku filan toddobaadkan. Qaabkani waa inuu soo galaa suuqa wax yar kadib markii aan awoodnay inaan ogaano. Waxa shaaca laga qaaday ayaa ah inay yeelan doonto baytari weyn.
Galaxy M30s wuxuu yeelan doonaa batteriga ugu weyn ka dhex jira taleefannada Samsung. Shirkadda lafteedu waxay ahayd tii daaha ka rogtay baatariga uu yeelan doono qaabkan cusub, kaas oo la filayo inuu dhawaan soo gaadho dukaamada. Xaqiiqdii Hindiya markii ugu horeysay.
6.000 mAh batari waa waxa ina sugaya Galaxy M30s. Shirkaddu waxay sudhatay boodhadh ay ku xusayaan awooddan batteri, iyadoo ay u dheer tahay inay muujisay inay tusaale u noqon doonto qoyskan dhexdiisa. Lama xaqiijin in kani yahay taleefanka adeegsanaya, laakiin waxaa horey loogu sheegay warbaahinta kala duwan.
Waa marka lagu daro ah moodeel leh baytarigii ugu weynaa ee aan ku aragnay Samsung. Marka sidoo kale waxay u taagan tahay isbeddel muhiim u ah soo saaraha Kuuriya ee arrintan la xiriira. Batariga weyn, kaas oo u turjumi doona ismaamul wanaagsan bartan-bartanka cusub.
Telefoonkan mar hore ayaa la sugayaa iyadoo xiiso leh, waa inaysan ku qaadan waqti dheer inuu suuqa gaaro. Warbaahinta qaar ayaa tilmaamay in Galaxy M30s waxay ahayd in la soo saaro bishii Ogosto, sidaan horeyba kuugu sheegnay. In kasta oo aan la ogeyn in aan la kulmi doonno maalmaha yar ee aan ka tagnay bishan Ogos. Waxay umuuqataa wax aan macquul aheyn.
Si kastaba ha ahaatee, waxay umuuqataa inay kudhowaad udiyaar garowday inay suuqa gasho. Sidaa darteed Samsung waxay sii wadaa inay dib u cusboonaysiiso heerkeeda dhexe qaabkan. Wax walba waxay muujinayaan in Galaxy M30s uu noqon doono ikhtiyaar wanaagsan dhex-dhexaadkan, kaas oo shaki la'aan u istaagi doona baytarigiisa weyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Galaxy M30s wuxuu la imaan doonaa batari weyn